Umshini ekhishini - lokhu ingenye amathuluzi ebalulekile ekufezeni ukuhlolwa amaningi Culinary. Nokho, ububanzi yesimanje ekhaya Imishini ngokuvamile kuholela ukudideka uma ufuna ukukhetha into eyodwa. Konke kuba nzima ikakhulukazi uma kudingeka kuhhavini kagesi eyakhelwe. Kubalulekile ukwazi ukuthi sikhethe kahle futhi yiziphi izici lobuchwepheshe kanye nemisebenzi libhekene uhlobo oluthile imishini.
Umshini kagesi eyakhelwe indawo enhle kakhulu umsizi Omuny ekhishini, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi akhethe okuhle. Njengoba ipharamitha kuqala ezibalulekile futhi kungenziwa okuthiwa phakathi amadivayisi abanjalo bangabaphostoli amandla amaningi futhi ukusebenza uma ziqhathaniswa akanandaba futhi Ubukhulu yabo yangaphakathi. Yiqiniso, izindleko onobuhle esishunyekiwe iphezulu kakhulu, kodwa ekugcineni baba ukuzithethelela. abakhiqizi abaningi owaziwa ayeke ngokuphelele elikhiphe khulula emi onobuhle. ke Kuyancomeka ukuthenga le ndlela kuphela ezimweni lapho kungekho kungenzeka kokufaka esakhelwe kuhhavini noma ubekelwe khona imingcele ku uhlelo lwezimali.
Lesi sibalo kubaluleke kakhulu ukukhethwa, njengoba kunquma kahle futhi Ukusebenziseka zedivayisi esikhathini esizayo. Umshini kagesi eyakhelwe angase abe namandla 2-4 kW, lapho abasebenzisi iningi labantu lintula igagasi. Lokhu kulinganisela liyithinta ngokuqondile ku-izinga lokushisa esiphezulu lapho ukulungiselela ukudla. Imodeli ebanda kunazo, namandla kilowatts 35 noma ngaphezulu, kuba, isibonelo, Bosch HBG 76R560F, Pyramida F 120. Inani esiphezulu lokushisa okukukho 500 degrees Celsius. Nokho, it ufaneleka ngaphansi komkhakha izici ezithakazelisayo, hhayi izinzuzo, njengoba kudingeka lokushisa imingcele akuzona ezingaphezu kuka-220 degrees ukupheka. Ngakho-ke, ngaphandle kwesidingo umsebenzi ngamazinga ashisa kakhulu ngokwanele ukuze ube namandla 2.503 kilowatts imodeli ukuthi okukhiphayo kuze kube degrees 250.
kuhhavini kagesi eyakhelwe, intengo 350 zamadola ngenhla, ngokuvamile has a ivolumu amalitha angu-50, okuyinto kubhekwa njengento evamile umsebenzi, okungukuthi, ukupheka ekhaya. Nokho, kukhona inqubo, elinesimo usayizi ezincane okungukuthi 20-30 amalitha. Ukuthola yalezi zindlela kuyafaneleka esimweni lapho ayikho indlela ukufaka idivayisi ngesayizi enkulu. Ukuze uqhathanise kungaba kuqashelwe ukuthi le khulula emi Ohhavini zinezikhathi hhayi ningi than 30 amalitha.
Standard for amakhabethe ezivamile ongakhetha 60h60h55 abone. Okwamanje, akhelwa kagesi kuhhavini 45 cm, okuyinto bagxile ukusetshenziswa ifenisha ukuhlelwa okukhethekile lapho. Futhi namuhla ahlinzekwa onobuhle ngamakhamera ezimele ezimbili, kodwa ebubanzini nasekujuleni kwazo 100 cm. Izindleko imishini enjalo kunzima ukuqamba phakathi, ngakho-ke akufanele ibhekwe kakhulu ngokucophelela. Inketho oluyilo ukukhetha imodeli ne Ubukhulu ejwayelekile, njengoba abakhiqizi kakhulu ukukhiqiza kubo ncamashi lecinisekisa ukuyikhokhela.
Okwamanje kukhona Ohhavini, yokuhlanza owenziwa ngu eyodwa yezindlela: bendabuko, noma okhanda amanye amathuba pyrolysis. Ngamunye wabo kufanele kubhekwe kabanzi. Ingqikithi indlela evamile wukuthi kwezindonga engaphakathi imbozwe koqweqwe lwawo kuhhavini ekhethekile. It kuvela ukuthi edingekayo ingalo yokuwasha kanye izipanji nezilwane uqhubeke ukugeza inqubo eyinkimbinkimbi ukuze bahlanze evele ingaphakathi.
indlela Catalytic izitshela ukuthi ihlanganisa kwezindonga engaphakathi kuhhavini ne ekhethekile koqweqwe lwawo ikhule ezimbotsheni ekhuthaza noqhekeko amafutha nokususwa ngqo inqubo ukupheka. Uma ayethanda wena ke kuhhavini kagesi Sakhiwa, isitatimende uzofaka phakathi ulwazi ngakho. Nokho, ngokuvamile i-ngokoqobo akuyona kamnandi kangaka, ngakho kuyodingeka kabusha ingalo ngendwangu futhi yokuwasha, ukubhekana Izinsalela zalesi sithako.
Pyrolysis indlela kubhekwa ngempumelelo kakhulu futhi okuqhubekayo. Umshini kagesi esakhelwe (ububanzi 45 cm) nge umsebenzi ofanayo - yonga isikhathi nomzamo wokwenza kanjalo. Ingqikithi yalo ndlela kanje: uma imodi ehlukene ikhamera idivayisi iku eliwu 600 degrees Celsius isikhathi esifushane, okuyinto kwanele ukuthi amafutha anqwabelene ezindongeni, wazishisa ngomlilo. Okulandelayo, uzobona kuphela avule umnyango kuphole phansi izindonga, bese zisuswe nge izinsalela indwangu emlotheni. Nezimoto ezifakelwe benethuba ukwelashwa pyrolysis, kukhona ethile eyodwa kuphela - it is kuyabiza kakhulu amadivaysi adlula ezivamile. Kukhona onobuhle eziningana Ohhavini umsebenzi onjalo, okuyizinto athandwa kakhulu: Electrolux EOB 53410 AX, Bosch HBA 23B263E, Gorenje BO75SY2B. Kukhona futhi ethengekayo ngokuya intengo: Electrolux izimpahla zabo 3430 Cox, Beko OIE 25500 X, Bosch HBA 63B265F, Siemens HB 63AS521.
Modern esakhelwe izitofu kagesi kanye Ohhavini zinezikhathi ukusebenza kuqhathaniswa ocebile, kuhlanganise khona timer futhi Ukubika Inkinga YeWindows. Lesi sakamuva Kuhle kokusho. Ngokuyisisekelo, Ukubika Inkinga YeWindows kuqinisekiswa ukuba khona Blower ekamelweni kuhhavini esilawula amazinga okushisa emoyeni futhi inikeza okuningi ukupheka okusheshayo futhi iyunifomu. Abanye onobuhle usebenzise Ukubika Inkinga YeWindows ezimbili, kodwa akukuniki yimuphi izinzuzo ekhethekile phezu ongakhetha elula. Grill umsebenzi - ongakwenza yesimanje, lapho ifa 99% Ohhavini yesimanje. Ngosizo lwawo ungathola ukuthi uqweqwe efanayo ebomvana ku ukudla, okuyinto ethandwa kangaka nge eminingi.
Rotisserie - Lolu khetho, okungase ngiziqhayise onobuhle ezimbalwa kuphela. Uma fan of inkukhu eyosiwe sasipheka ngesitofu namathe, kufanele ufune leli thuluzi. Kunezinhlobo eziningana inokudla benethuba: Electrolux izimpahla zabo 5951 AOX, Hotpoint-Ariston FH 1039 P IX.
Abakhiqizi azigcini nje lapho, ngakho kwezinye tinkhulumo ungathola izici ezifana cooker ingcindezi, imodi microwave, beya inqola, izinga lokushisa probe, nezinye, exotic nakakhulu. Esikhathini esiningi abantu bawela esilingweni ukuthatha ngezinsimbi eyinkimbinkimbi kunazo ifakwe mass izindlela ezengeziwe, ngenxa ukusetshenziswa okukhethekile walabo izici ingatholakala izinketho nengabizi. Bese ungakwazi ukunikeza ucezu eziwusizo kakhulu iseluleko: sengizama ukunquma ukuthi ngaphambi ukukhetha sokugcina, ukuthi kukho konke, ngempela singaba usizo kabi. Kwenza akukho mqondo ukuze overpay ngokuba khona iqoqo amatshe pizza noma yamalahle, okuyinto awukaze ukusizakala.
Kulokhu, singakhuluma ukuthambekela ezithile - ayanda izindleko ubuchwepheshe, ikakhulukazi abaphathi bayo ngaphezulu gesi. It kuvela ukuthi uma phambi iyunithi yakho izobiza 300-400 zamadola, 9 Ezimweni aphume 10 kuyothiwa ifakwe isilawuli namasumpa lokukhanda. Okunjalo esakhelwe kuhhavini kagesi - "Ariston" noma ezinye brand - ungenalo ukubonisa, kanye nezinkomba elisetshenziswa kubo - mechanical kuphela. Ukuze esibukweni zedivayisi electronic liyadingeka baphonse omunye zamadola 100-200. Kukhona onobuhle, okwabangela inhlekelele engaphezu kuka- $ 700-800, banayo hhayi kuphela umsebenzi omkhulu ukubonisa, kodwa futhi izilawuli touch.
Uma sikhuluma ngalokho ngokuqinile kufanele kube kuhhavini, isimo kufana kukhethwa iyiphi enye into yokwenza yasendlini. I kunazo baqaphela imodeli izinga abakhiqizi Swedish, Austria futhi German abahamba ngqo ekhaya. Ngokuvamile libhekisela Bosch, Electrolux, Siemens. Kufanele ukuba wesabe abakhiqizi elaziwayo elincane, isibonelo, DEX, Mirta, Saturn, Ariete, Vimar. Kukhona abameleli lentengo isigaba isilinganiso, okuhlanganisa Hotpoint-Ariston, Gorenje, Beko, Zanussi.
Kukhona imithetho ethile yokuphepha, ukuhambisana okumele eziqhutshwa kuhhavini kagesi eyakhelwe. Uphenyo lolutsite bangabonisa izici ngalo abasebenzisi kwadingeka abhekane nalo. Kodwa kukhona uhlu ezisetshenziswa emhlabeni wonke jikelele:
- musa ukuvumela izingane ukuba seduze kuhhavini futhi uxhumane ne-control panel ngokungabi bikho abadala;
- ngenkathi ezibandayo, kuhhavini akufanele isetshenziswe njengoba heater;
- Ngaphambi kokuvula lisebenze, kufanele zisuswe kusukela kunoma yimaphi izinto ezingadingekile;
- Ngemuva ukusetshenziswa ngamunye, idivayisi kumele usule yonke amabala Splashes, eyabonakala ku iphaneli kwangaphakathi, kanye nesidingo sihlale njalo siqaphele ekuhlanzekeni grids emathileyi, ngezikhathi ukugeza ngaphandle, ikakhulukazi khona iphaneli touch.
Abanye onobuhle abe umsebenzi ukuvala shaqa ngokuzenzekelayo icushiwe uma ukuhlinzwa eside ngokweqile noma uma idivayisi overheats. Umshini kagesi eyakhelwe "Bosch" ifakwe othomathiki uhlelo ukuthi isebenze ngokucindezela inkinobho ukuthi ayikuvumeli izingane ukuvula umnyango ngesikhathi ukusebenza noma ukubeka Izilawuli endaweni.
Njengoba ubona, kukhona iziqondiso ezilula ezimbalwa okukhetha amadivayisi ekhishini edingekayo yokukhipha usizi. Akunandaba ukuthi yini okhetha ekugcineni - eyakhelwe kuhhavini kagesi 45 cm noma onobuhle osayizi ejwayelekile, inqobo nje uma idivayisi esekukhonze iminyaka eminingi. Ukukhetha imishini esifanele, ungathembela lula ukupheka wonke umndeni. Nge kuhhavini entsha elingangena ngokuphepha ukuncela baking zokupheka oyenze ethukile ngenxa amathuba ukungafani amadivaysi atholakalayo.
Ukulungiswa: wukuthi kuyini lokho? ukulungiswa Psychological and Pedagogical